एघार दिनपछि ओलीसँग भेटेर के भने प्रचण्डले ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एघार दिनपछि ओलीसँग भेटेर के भने प्रचण्डले ?
एघार दिनपछि ओलीसँग भेटेर के भने प्रचण्डले ?	सचिवालय बैठक राखेर विवादित विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव
कात्तिक १५ गते, २०७७ - १९:०५
पार्टी भित्र विवादको रुपमा देखिएका यी विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल गरिनु पर्नेमा प्रचण्डले जोड दिएका हुन्। ओली-प्रचण्डबीच कात्तिक ४ गते कर्णाली प्रदेशको विवाद सल्ट्याउने सन्दर्भमा भेट भएको थियो।
कात्तिक १५ गते, २०७७ - १९:०५ मा प्रकाशित